Madaxweyne Farmaajo oo Addisababa uga qaybgalaya shirka Midowga Afrika - Halbeeg News
Madaxweyne Farmaajo oo Addisababa uga qaybgalaya shirka Midowga Afrika
ADDIS ABABA (HALBEEG)- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa halkaasi kaga qeyb geli doona shir madaxeedka Midowga Afrika ee berito ka furmaya Addis Ababa.
Ajandaha shir sanadeedk golaha Midowga Afrika wax uu sannadkan ku saabsan yahay sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada qaxootiga iyo barakacaayasha Qaaradda Afrika loona horumarin nolosha ay ku nool yihiin.
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeedin doona kulanka Midowga Afrika ayaa la filayaa in uu ka hadli arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalalka deriska iyo barakacayaasha ku sugan dalalka deriska.
Farmaajo ayaa la filayaa in kulamo gaar gaar ah la yeesho madaxda dowladaha Midowga Afrika ee shirkan ka spp qeybb galaya.
Sidoo kale waxaa shirkan diiradda lagu saari doonaa arrimaha horumarinta iyo maalgashiga afrika, nabadda iyo ammaanka iyo iskaashi dhex mara wadamada soo koraya iyo Midowga Yurub wixii loo gaaro sanadka 2020-ka.
Madax kala duwan oo Afrikaan ah ayaa gaaray magaalada Addis Ababa si ay halkaasi uga qeyb galeen shirka Midowga Afrika.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax Al-Siisi ayaa kulanka dowladaha Midowga Afrika shirguddoomin doona waxaana la filayaa in kulanka lagu doorto Guddoomiyaha Midowga Afrika sii hayn doona xilkan illaa 2020-ka.
Soomaaliya oo muddo 30 sano ah kaddib marti gelineysa ciyaar heer caalami ah
Shir madaxeedka Midowga Afrika oo maanta ka furmaya Addis Ababa